Home Wararka Maxaa ka soo baxay kulankii hordhaca ahaa Saciid Deni iyo Axmad Madoobe?
Maxaa ka soo baxay kulankii hordhaca ahaa Saciid Deni iyo Axmad Madoobe?
Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni iyo Madaxweynaha Jubaland, Axmed Maxamed Islaam ayaa kulan gaar ah ku yeeshay xarunta Madaxtooyada Puntland ee Caasimadda Garoowe.
Kulankan oo ahaa mid hordhac ah islamarkaana albaabadu u xiran yihiin ayaa labada mas’uul uga wada-hadleen Arrimaha Doorashooyinka Aqalka hoose ee Baarlamanka Federaalka Soomaaliya.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Siciid Deni iyo Axmed Madoobe ay isla soo qaadeen in aysan Doorashada iyagu hor bilaabin si ay u qiimeeyaan Dowlad Goboleedyada kale hadba sida ay u maamulaan doorashada Golaha Shacabka. Labada mas’uul ayaa sidoo kale isla meel dhigay in ayan qaadin wax tilaabo ah ilamaa go’aan sax ah laga gaarayo qaabka doorashada u dhacayso.
Waxa ay ka soo horjeedaan qorshaha Farmaajo uu ku doonayo in bishiiba tiro kooban oo xildhibaano ah uu ku soo saaro si doorashada u gaarto ilaa bartamaha sanadka danbe. Labada mas’uul ayaa sidoo kale lagu wadaa in ay kulamo dambe ka yeeshaan soo xulidda Xildhibaannada Aqalka Hoose ee ka imaanaya Puntland iyo Jubaland.